SOMALITALK - DADWEYNAHA
FIQI TOLKIIS KAMA JANNO TAGO
Mohamed-Deeq Abdi-madar "Haldhaa" | Qoraa iyo saxafi soomaaliyeed
Borlänge, Sweden | haldhaa35@hotmail.com
Waxaa yaab iyo fajac igu dhaliyay markii aan arkay maqaalkii ahaa "Prof. Cabdi Samatar oo diiddan ogolaanshaha Dr. Cali Khaliif Galaydh in uu Wax ka dhigo Jaamacadda Minnesota". Markiiba waxaan ku degdegay inaan maqaalka hoos ugu dhaadhaco oo guntiisa ogaado. Waxaan filayay in diidada Prof. Samatar ay ka danbaysay la tashi lala yeeshay oo wax laga weydiiyay shaqaalaynta Dr. Ali Khaliif. Nasiibdarrose taasi maysan dhicin. Isagoon waxba laga weeydiin ayuu isku dayay inuu Dr. Ali Khaliif fursaddaas ka hor-istaago, isagoo weliba dhaleecayn fool-xun u gaystay.
Waxyaalihii uu Prof. Samatar ku eedeeyay Dr Cali Khaliif waxaan kadi ahaa " Dr Galayr wuxuu leeyahay sooyaal magac xumo dheer bulshada dhexdeeda, taas oo ugu danbeyna wax gaarsiin karta sumcadda machadka & jaamacada minnesota" Wuxuu kaloo eedeeyay in Dr Cali Khaliif uu Lunsaday lacag gaareysa hal milyan oo doolarka mareykanka ah.
Diidmadaas aan waxba laga weeydiin iyo dhaleecayntaas uu Prof. Samatar kula kacay Dr Cali Khaliif way iga degi weyday. Sababtoo ah arriin ana waxba lagaa weydiin soo dhex-galkeedu waxay ila tahay, wax aan fiicnayn. Haddii isaga wax laga weydiin lahaa, dee siday latahay uun buu ka odhanlahaa. Lakiin taasina ma aysan dhicin.
Haddaba waxaa is weeydiin leh, haddiiba uu Dr Cali Khaliif lunsaday lacagtaas uu sheegayo, Ma Prof Samatar ayaa lacagtaas iska lahaa, mise qaran soomaaliyeed ayaa iska lahaa ?!. Waase maxay sababta ku kalliftay Prof. Samatar inuu ku kaco labo arrimood oo aan fiicnayn. Kuwaas oo kala ah; Xaasinido uu ka xaasiday Dr. Cali Khaliif inuu fursaddaas helo iyo dhaleecayn iyo ceeb marmarin shaqsi kale?!.
Inkastoo aanan jeclaysan falka uu Prof. Samatar ku kacay, anigoo aan difaacayn Dr. cali Khaliif, haddana dhinac fiican ayuunbaan ka eegay. Waxaanan is idhi "Prof. Samatar wuxuu doonayay uun in dadkii dembiyada ka galay soomaaliya eedahooda dusha looga rido, dadkana la tuso xumaantooda".
Nasiib-darrose malahaygii ma rumoobin. Arrintu intaas wey ka weeynayd. Malaha wax kalaa jiray?!. Haa wax kalaa jiray. Waxayna soo baxeen wixii kalee jiray taariikhdu markii ay ahayd Agoosto 16, 2002, shirkii ardada soomaalida ee Minnesota, markii uu Prof. Samatar kahadlay jaamacahada Hargaysa, Xamar iyo Camuud oo uu tii Boosaasana sooba hadal qaadi waayay. Deedna qaar mooday inuu hilmaamay, intay weeydiiyeen uu ugu jawaabay "Hinaase waa jiraa, Daar waa la furi karaa... "
Arrintu soomay noqon "Hooyadeen maxaad ku ogayd? Indho la’aan. Dad cunnimana wey ku darsatay"
Erayadan qallafsan ee aan ruux heerkaas jooga kaba soo bixi karin, markaan arkay ayaan go’aansaday inaan Prof. Cabdi Samatar u jawaabo. Intii aanan jawaabinna waxaan marka hore isku dayay inaan Prof. Cabdi Samatar e-mail u diri si aan uga xaqiiqsado inuu erayadaas yiri iyo in kale. Laakiin Prof. Cabdi Samatar wax jawaab ah kamaan helin. Mana garanayo inuu e-mail-kii aan u diray uu sax ahaa iyo in kale. Maalintaan e-mail-ka u diray maalinteedii kale ayaan maqaalkan qoray, anigoo aan weli wax jawaab ah ka helin.
Markaan maqaalkan qorayay waxaan ugu horrayntiiba is-weeydiiyay "Waa kuma Prof. Cabdi Samatar?. Maxaase arrimahan ku kallifay?". Deedna waxaan ku eegay indho aqoonyahan iyo caalamka casriga ah indhahood. Indhahaasoo ka fog qabiil, aqoonta iyo wax-barashadana guubaabiya, ee aan dhaleecayn. Lakiin indhahaas waan ku arki waayay Prof. Cabdi Samatar. Sababtoo ah haddii uu yahay nin aqoonta guubaabiya jaamacadaha kalana ma uusan ammaaneen, Jaamacadda Boosaasona si kastaaba ha loo aasaasee ma uusan dhaleeceeyeen jiritaankeeda. Mana uusan yiraahdeen "Hinaase waa jiraa, Daar waa la furi karaa…" . Iyadoo aannu ognahay baahida aannu maanta u qabno in wax-barashada lagu tartamo oo lagu xintamo, meesha qorayaha iyo hubka lagu tartamayo.
Prof Cabdi Samatar "Hinaase waa jiraa, Daar waa la furi karaa... haa waa labilaabay jaamacadaas laakiin uma dhawa midda Camuud & midda Hargaysa iyo Muqdisho,..GUJI.
Midda kale erayga "Hinaase" oo koonfurtna ka ah "Masayr" dhaqanka somaalida ragga ama ummad dhan looma adeegsado, ee waxaa hinaasa ama masayra haweenka lala guursado. Boosaasana Xamar, Hargaysa iyo Booramaba waxay uga hinaasto anigu garanba maayo. Haddaanay ka wacnayna, kama liidatee. Markaan sidaas leeyahayna anigu Boosaaso dhalasho iyo degaan tooma uma lihi. Xitaa reer Puntland maahi.
Markaan indhii aqoonayahana casrigan ku arkiwaayay, ayaan haddana ku eegay indhaha soomaalida diiraddoodu ay qabiilka ahyd. Markan waaba Prof. Cabdi Samatar oo weeyn oo aan caad saarnayn. Sababtoo ah dhowr todobaad ka hor shirkan ardayda Soomaalida Minnesota wuxuu dhalada ka saarnaa oo uu dhaleecaynayay Dr. Cali Khaliif. Kadibna oo ka soo jeeda Puntland. Wuxuu kaloo Hinaase iyo daar layska dhistay ku sheegay jaamacadda Boosaaso. Kuwii Xamar, Hargaysa iyo Booramana wuxuu ku sheegay kuwo dhaqan wanaagsan iimaan sugan lagu dhisay.
Haddaba maxaa keenay in Dr. Cali Khaliif la weeraro, jaamacadda Boosaasana la caayo?!. Waxaan qabiil ahayn ma ku sheegi karnaa?!!. Mase oran karnaa Prof. Cabdi Samatar wuxuu ku sifoobay maahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd "FIQI TOLKIIS KAMA JANNO TAGO"
Mohamed-Deeq Abdi-madar "Haldhaa"
Qoraa iyo saxafi soomaaliyeed
9/2/2002 | Faafin: September 9, 2002
DOODFURAN: ARAGTIDII DADWEYNAHA EE HADALKII Pr. SAMATAR:
Qoraalka ku qoran Boxes-ka
Sheekh Ciise. Ciise Dhollowaa. Dr.David
Bookta laga baxshey Latrobe Bookshopka
MASHRUUCA SAMAFALKA SOMHEEDO http://somalitalk.com/somheedo